New Apple patent inoratidza nzira nyowani yekuchaja yeApple Watch | Ndinobva mac
New Apple patent inoratidza itsva nzira yekuchaja yeApple Watch
Iyo patent nyowani inoenderana ne Apple Watch Yakaiswa muUS Patent uye Trademark Hofisi.Iyo patent isingasvike kuzotaura nezve chero chinhu kunze kwenzvimbo huru isina kusimba yemidziyo inopfeka, bhatiri rayo. Panyaya yeApple Watch, isu tese vane yavo tinoziva kuti vanofanirwa kupfuura nenzira yekuchaja kamwe pazuva uye kana muchiita Kunyatsoshandisa kwayo kunogona kutungamira kucharger kaviri.
Avo veApple vanozviziva uye nekuda kwechikonzero ichocho ivo vanoramba vachiongorora nekuburitsa patent izvo pamwe, nekufamba kwenguva, isu tichaona kana kusazadzikiswa sechigadzirwa chekupedzisira.
Apple yakaisa patent nyowani mu Vanozivikanwa uye Patent Hofisi mune iyo nyowani yekuchaja sisitimu yeApple Watch bhatiri inotsanangurwa zvakadzama zvakadzama, recharging system iyo zvakare ingave iine hukama neiyo induction system, asi iyo yaizoshandisa kufamba kweiyo ruoko pachayo kana ichifamba kuti ibudise simba.
Simba iro rinogona kuita kuti chishandiso chishande pamwe nekuchinjazve bhatiri, izvo zvinopa mushandisi kuzvitonga kuzhinji kwekushandisa. Sezvauri kuona mumifananidzo inoenderana nechinyorwa ichi, ichave iri recharging system iyo Inenge iri pane tambo yekutarisa uye yaizosungirirwa nenzira yekuvharwa kwemagineti.
Chimwe chezvipingaidzo cherudzi urwu rwekuchaja zvakare ndechekuti bhatiri panguva yekuchaja raizowedzera tembiricha yayo uye izvi ndizvo chaizvo izvo vanhu veCupertino vangave vachifunga nezvazvo izvozvi kana izvo zvinoonekwa kubva patent. Iyo patent inozvidaidza yega Kuchaja chishandiso chemuchina unosakara wemagetsi uye nekupinda mu link iwe unogona kudzidza zvakawanda nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » New Apple patent inoratidza itsva nzira yekuchaja yeApple Watch
Dzivirira MacBook yako neaya akanaka mvere akanzwa kesi
Apple Watch yakatsvairwa pakupera kwa2016